भोलि बैशाख ९ गते बिहिबार अशुभ-शुभ कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल! – Ramailo Sandesh
भोलि बैशाख ९ गते बिहिबार अशुभ-शुभ कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल!
परिवारसँग उग्र वाद-विवाद हुनाले मन ग्लानिले भरिएको हुनेछ । छातीमा पीडा वा अन्य कुनै विकारले निराशा अनुभव गर्नुहुनेछ। निरर्थक आर्थिक खर्चबाट बच्नुहोला। मन चिन्ताग्रस्त रहनेछ। सकेसम्म भ्रमणमा नजानुहोला। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। बौद्धिक चर्चाबाट टाढा रहनु नै तपाईको लागि फाईदादायक साबित हुनेछ।
हरेक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त हुनेछ। सामाजिक दृष्टिले मान-सम्मान मिल्नेछ। मध्यान्ह पछि झगडाको वातावरण बनिरहनेछ। तपाईको प्रफुल्लित र उर्जा निराशामा परिवर्तन हुनेछ। मानहानिबाट बचेर रहनुहोला।
धेरै समय क्रोधित रहेर बित्नेछ। शारीरिक र मानसिक रुपले निराशा अनुभव गर्नुहुनेछ। व्यर्थ पैसाको खर्च हुनेछ। विधार्थीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्नेछैनन्। मध्यान्नपछि मित्र वा आफन्तसँग भेट हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। आर्थिक लाभ मिल्नेछ। भाईबहिनीसँग प्रेम बढ्नेछ। भाग्यवृद्दिको प्रसंग बन्नेछ। कार्य सफलताबाट उत्साह बढ्नेछ।
तपाईको दिन आनन्दमा बित्नेछ। केहि अधिक संवेदनशील बन्नुहुनेछ। तपाईको दिन शारीरिक र मानसिक सुखमा बित्नेछ। आफन्त र मित्रसँग भेट हुनेछ। मध्यान्नपछि परिवारसँग कुराकानी गर्दा उग्रता आउनाले मन चिन्तित रहनेछ। तपाईको मनोवृत्तिमा नकारात्मक परिवर्तन एवम् निराशाजनक विचार आउन सक्ला। क्रोधमा विशेष ध्यान दिनुहोला।
तपाईले बोलि र व्यवहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आफन्तसँग मन दुख्ने प्रसंग बन्न सक्ला। आयको अपेक्षा व्यय अधिक हुनेछ। मानसिक भ्रान्तिलाई सकेसम्म टाल्नुहोला। स्वास्थ्य प्रति जागरुक रहनुहुनेछ। मध्यान्नपछिको समय तपाईको लागि अनुकुल रहनेछ। नयाँ कार्य आरम्भ गर्नुहुनेछ। आफन्तसँग भेट हुनेछ। कार्य सरलता मिल्नुको साथै आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेछ।
विविध क्षेत्र बाट लाभ होला। व्यवसायिक क्षेत्रमा लाभ मिनेछ। सहकर्मीको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। मित्रवर्गको लागि खर्च गर्नुहुनेछ। यात्रा वा भ्रमण हुने सम्भावना रहेको छ। मध्यान्नपछि तपाईको मन अनिश्चिततामा अल्झीरहनेछ। आफन्तसँग भेदभावको प्रसंग उपस्थित हुनेछ। रिसको कारण कसैसँग उग्र चर्चा नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। स्वास्थ्यको विशेष ध्यान राख्नुहोला। तपाईको तुलनामा खर्च धेरै हुनेछ ।
तपाईको लागि दिन निकै शुभ रहेको छ। धार्मिक काम र दैवियदर्शनबाट लाभ मिल्नेछ। तपाईले विविध क्षेत्रबाट लाभ पाप्त गर्ने योग रहेको छ। उच्च अधिकारीको तर्फबाट प्रोत्साहन मिल्नेछ। पदोन्नति हुने योग रहेको छ। प्रियपात्र वा मित्रसँग भेट हुनेछ। पर्यटन स्थलमा जानुहुनेछ। तँ र मनबाट नै स्वस्थ रहनुहुनेछ। उत्तम लग्नसुख प्राप्ति हुनेछ। युवक- युवतिको बिहे हुने योग रहेको छ ।
तपाईको लागि दिन धुभ रहेको छ। धार्मिक यात्रा वा दैवियदर्शनको लाभ मिल्नेछ। विविध क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। विदेश गमनको लागि परिस्थिति अनुकूल रहेको छ। उच्च अधिकारीको तर्फबाट कार्य प्रसन्नता मिल्नेछ र प्रोत्साहित हुनुहुनेछ। स्थानवृद्धि होला। प्रियपात्र र मित्रसँग भेट हुनेछ तथा कुनै पर्यटनस्थलमा घुम्न जानुहुनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ ।
कुनै पनि नयाँ कार्य आरम्भ नगर्नुहोला। निराशा र ग्लानिको भाव तपाईको मनमा उत्पन्न हुनेछ। रिसलाई नियन्त्रण राख्नुहोला। परिवारसँग वाद-विवाद नगर्नुहोला। मध्यान्नपछि शारीरिक र मानसिक स्थितिमा सुधार होला। पारिवारिक कठिनाइ कम हुनेछ। मित्रसँग भेट हुनाले आनन्द अनुभव हुनेछ। धार्मिक स्थलको यात्रा हुनेछ र भाग्यवृद्दि प्रसंग बन्नेछ। भगवानको नाम-स्मरण र आध्यात्मिकताले मनलाई शान्ति प्रदान गर्नेछ।
तपाईको दिन मित्र र आफन्तसँग निकै आनन्दपुर्वक समय बिताउनुहुनेछ। मनोरंजन प्रवृत्तिको आनन्द लिनुहुनेछ। आफन्तबाट लाभ मिल्नेछ। व्यापारको क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। मध्यान्नपछि तपाईको लागि समय प्रतिकूल रहेको छ। शारीरिक र मानसिक रुपले अस्वस्थ रहनुहुनेछ। नकारात्मक विचारले मनलाई निराश बनाउनेछ।
दिन पूर्ण रूपले शुभ फलदायी रहेको छ। व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको लागि अनुकुल दिन रहेको छ। शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। दिनभर मनोरंजन प्रवृत्तिमा व्यस्त रहनुहुनेछ। साथै कुनै आनन्दमय स्थलमा घुम्न जानुहुनेछ। साथै आर्थिक लाभ हुनेछ। अत्यावश्यक चीजमा मात्र खर्च गर्नुहुनेछ।
तपाईको मन अशान्ति र उद्वेगमा छाईरहनेछ। कुनै कारणवश आकस्मिक धन खर्च हुनेछ। शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। मध्यान्नपछि घरमा आनन्द र शान्तिपूर्ण वातावरण रहनेछ। कार्यमा प्रसिद्दि प्राप्त हुनेछ। परिवारसँग समय आनन्दपूर्वक बिताउनुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ।
सानामा यस्ता थिए ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’ को चार जना कोचहरु….भिडियो हेर्नुस
ग-म्भीर बिरामीलाई मात्र अस्पताल भर्ना, एक हप्ता लकडाउनको सिफारिश!